China Plansifter Kugadzira uye Fekitori | Chinatown
Iyo FSFG yakateedzana plansifter ndeimwe yezvigadzirwa zvedu zvepakati zvakagadzirwa pahwaro hwemazano matsva. Inogona kunyatso kusefa uye giredhi iyo granular uye pulverulent zvinhu. Semushini wekutanga wekusefa hupfu, inokodzera vagadziri veupfu vanogadzira gorosi, mupunga, duramu gorosi, rye, oat, chibage, buckwheat, zvichingodaro. Mukuita, urwu rudzi rweguyo kusefa rinonyanya kushandiswa kugadzirisa grinded gorosi uye yepakati zvinhu kusefa, zvakare yeupfu cheki kusefa. Yakasiyana sieving magadzirirwo anoenderana akasiyana kusefa ndima uye epakati zvinhu.
1. Iyo saeve furemu saizi inowanikwa mu640 × 640mm uye 740 × 740mm.
Sisitimu yeplififter inogadzirwa nesimbi yakamanikidzwa, nepo mukati mabhokisi emadziro achiwanikwa mune isina simbi. Anogadziridzwa anorema akaiswa neakasarudzika SKF (Sweden) yekuzvimiririra-yekumisikidza mhando yakapetwa kaviri roller roller.
3. Iwo mafuremu ehefa anogadzirwa kubva kunze kwenyika kwehuni iyo mukati nekunze zvese zvakaputirwa nepurasitiki melamine lamination. Izvo zvinodzika uye zvinachinjika. Mafuremu ehefa akagadzirwa nesimbi dzesimbi. Chikamu chega chega chakasungwa nesimbi simbi uye kumanikidza masikirini emicrometric kubva kumusoro. Zviri nyore uye nekukurumidza kuchinja iyo kusefa scheme yeplansifter pazvinenge zvichidikanwa.
4. Dzinoburitsa nzvimbo dzeupfu hwekusefa nhumbi dzinouya nemapurasitiki matema mukati megiravhiti ichingoburitsa chiyero.
5. Masefu eSEFAR anotorwa.
6. Iwo masefu eNOVA anowanikwawo kune iyo mapurifter. Yayo aruminiyamu yemukati sieve inogona kusangana yakakwira hutsanana zvinodiwa, uye yayo hombe bhaudhi nzvimbo uye yesainzi chimiro inogona kupa hukuru sieving kuita munzvimbo shoma nzvimbo.
7. Zvese zvinhu zvinosangana nezvinhu zvakananga zvakagadzirwa nesimbi isina tsvina kana zvimwe zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kuverengera degree rakakura rehutsanana.
8.Purplififter yedu inouya neyakagadziriswa modular zvinoenderana nezvamunoda. Inowanikwa mune mana-chikamu plansifter, matanhatu-chikamu plansifter uye sere-chikamu mapurani, kuitira kuti iwe ugone kuita yakawanda yenzvimbo iripo.
9.Rusvingo rwemukati nemusuwo zvinouya nehunyanzvi hwekupisa hwekupisa, zvichidzivirira makesi ekunyorovera kusvika padanho rakakura.
(chikwata) Nesefa Height (mm) Sieve Frame Kureba
(hapana yepamusoro sesefa furemu)
(mm) Min Kukwirira kweiyo Kuisirwa
(kW) Rotary Dhayamita
(R / Maminitsi) Sefa Nzvimbo
Muchina unofambiswa nemota inoiswa mukati meiyo huru furemu uye yakaenzana-neyakaenzana nehuremu. Muchina wega wega une zvikamu zvina, kana zvitanhatu, kana zvisere zvisere mukati. Zvinhu zvakasiyana zvinoyerera zvichipinda muchikamu chakasiyana munzira yayo. Sekureva kwemunhu dhizaini yezvinhu zvakasiyana, iyo nesefa inosvina zvakasiyana granular zvinhu kune akasiyana anotevera ndima muupfu zvigayo kana muchina wese uchimhanya.
Sefa puranga uye hutachiwana furemu
Dhizaini yakasarudzika yekubatanidzwa kweiyo huru furemu uye zvikamu muzvikamu zvakakurisa, uye izvo zvinhu zvinotora yakaderera chiwanikwa mota kusanzwisisika.
Sefa furemu mbiru
nesefa furemu ikholamu inotora yakaderera chiwanikwa kutonhora extrusion isina musono yakaita simbi pombi, kutora mortise-tenon yekubatanidza chimiro pakati pepamusoro uye yepasi ndiro.
Square yemapuranga nesefa furemu, mapurasitiki akaputirwa, kupfeka nemishonga, kudzivirira nyorova deformation, makona akafukidzwa nesimbi kuti yakasimba kuoma, yakakodzera saizi, inokodzera kuchinjana. Iyo yekumira yekumanikidza yekuvharira mashini iri nyore uye yakavimbika, basa rakanaka pane iyo furemu kudzivirira upfu kubuda.
Sieve cleaners uye tray cleaners
Sieve cleaners inogona kudzivirira sieve ichivharira, uye matray ekuchenesa anogona kusundira zvinhu kufamba zvakanaka.
Fiber girazi zvinhu suspender.
Pashure: Bhakiti erevheta
Zvadaro: Plansifter Cleaner